Maitiro ekudzivirira mimhanzi kubva pakutamba kana tapedza kufona (tweak) | IPhone nhau
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko nyaya yekugashira foni yakaitika kwauri, kuipindura uye kana wapedza, mumhanzi unoramba uchiridza munzvimbo yawanga uri. Muzviitiko zvakawanda ndiyo nzira inonzwisisika, saka parizvino kuburikidza neIOS hatigone kumisa sarudzo iyoyo, kuitira kuti kana tagamuchira kufona uye zvopera, mumhanzi hautambe shure kwawakamira. Asi kana iwe uri mushandisi wejeri, zvinoita. Pazasi isu tinokuratidza maitiro ekudzima mimhanzi yekutamba patinopedza kufona.
Tiri kutaura nezve iyo PauseAfterCall tweak. Sekuona kwedu, zita rema tweaks, muzviitiko zvakawanda, rinogara richitipa rondedzero chaiyo yekuti inoshanda sei, uye iyi tweak haigone kuve shoma. Patinopedza kufona, isu tichiteerera kumumhanzi, nekuda kwePauseAfterCall tweak, kutamba kuchamira kuitira kuti zvisatikanganisa kana tichifanira kunyora pasi imwe data zvine chekuita nekufona kuri mubhuku renhare, tumira meseji kana kufona zvekare.
PauseAfterCall haishande chete neApple Music uye neyemimhanzi inoridzwa yakabatanidzwa muIOS, iyo dzimwe nguva isingashande sezvainofanirwa, asi inoshandawo zvakaringana nemamwe mapato echitatu mapato seSpotify, Pandora uye nezvimwe. Iyi tweak haina chero sarudzo yekumisikidza kana yaiswa iyo inoiswa mukuita uye ichadzivirira mimhanzi yataitamba pamberi pekufona kuti ienderere kunzwikwa.
Iyo PauseAfterCall tweak inowanikwa zvachose mahara paBigBoss repo. Parizvino kuputsika kwejeri kunongowanikwa chete kusvika paiyo iOS 9.1, uye zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti kana maChinese akasamhanyisa nhanho, tichasvika pane yegumi vhezheni yeIOS tisina kudzoka kuti tinakidzwe nekuparadzwa kwevasungwa, kunyanya vashandisi vasiri mushanduro dzinoenderana nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Maitiro ekumisa mimhanzi kubva pakutamba patinopedza kufona (tweak)